TBE-vaccination i Sörmland - Somaliska - 1177
TBE-vaccination i Sörmland - somaliska
Iska tallaal cudurka TBE
TBE-vaccination i Sörmland - somaliskaThe content concerns Sörmland
Qaniinyada shilinta waxay keeni kartaacudurka TBE. Sörmland waxay ka midtahay aaga khatarta ah. Sidaa awgeedwaxaa lagula talinayaa Tallaal, gaar ahaankuwa cawska iyo dhirta u dhow.
Waa maxay TBE?
TBE waa cudur fayruus ah oo faafa marka ay shilin ku qaniinto. TBE waxay keeni kartaa caabuq maskaxda ah ama xuubka maskaxda. Ma jirto daaweyn cudurkan guud ahaan. Tallaalkuse wuxuu bixiyaa difaac wanaagsan oo ka dhan ah TBE.
Qofkee u baahan inuu is tallaalo?
Haddii aad inta badan joogto duurka oo ah aag khatar ah waxaa lagula talinayaa inaad is tallaashid. Shilinta waxaa laga helaa cawska iyo dhirta, tusaale ahaan kaynta iyo caleemaha, laakiin sidoo kale beeraha cawska sare.
Waa halkee goobaha khatarta ah ee TBE?
Goobaha halista ah ee Iswiidhan waa: Sörmlands, Uppsalas och Stockholms län, iyo aagga Mälarregionen iyo agagaarka Vättern och Vänern. Goobaha halista ah ee ka baxsan Iswiidhan waa: Åland, Baltikum, Xeebaha Finland, Ruushka, Bartamaha- iyo Bariga Yurub oo ay ku jiraan Jarmalk iyo buuraha Alpern.
Tallaalka TBE ee xarumaha caafimaadka (vårdcentralerna)
Way habboonaan lahayd in aad iska tallaasho ka hor inta aanay kugu dhicin iyo si aad gabbaad (difaac) u hesho, xilliga shilinta & qaniinyada oo kala ah billowga maarso/abriil. Xarumo badan oo daryeelka caafimaadka waxay lee yihiin xilli Drop-in (la iska iman karo ballan la’aan), si aad isaga tallaasho TBE. Sidoo kale waxaad ballaan ka sameysan kartaa khadka taleefanka.
Bogga internetka ee 1177 oo cinwaankiisu yahay 1177.se waxaad ka heleysaa waqtiyada bilaa balanta la iska iman karo (drop-in) iyo macluumaad la xiriira xarumaha caafimaadka ee gobolka.
Sida Tallaalka u dhacayo
Talaalka aasaasiga ah wuxuu ka kooban yahay qiyaastii saddex cabbir oo tallaal ah oo sanadka kowaad ah. Haddii aad tahay 50 jir ama aad ka weyn tahay, waxaad u baahan tahay inaad qaadato afar cabbir oo tallaal ah sannadka ugu horreeya si aad u hesho gabbaad (difaac). (Taladni waana talo cusub oo la soo jeediyay laga bilaabo 2018.)
Intaa kadib, waxaa loo baahan yahay tallaal dheeraad ah. Oo cabbirka ugu horreeyo la qaadanayo seddex sanadood kadib, markaa kadibna shan sanadood kadib, iyadoo aan la eegayn da’ intay doontaba ha ahaatee.
Carruurtu waxay bilaabi karaan in la tallaalo laga bilaabo da’da hal sano.
Waa imisa kharashkiisu?
Adiga ayaa iska bixinaya tallaalkaaga. Carruurta iyo dhallinyara tallaalkoodu waa bilaash laga bilaabo markay 3 sannadood gaaraan ilaa iyo inta 19 sannadood ka noqonayaan meelah rugta caafimaadyada ee gobolada.
Naftaada ka ilaali shillinta - Waxa aad adigu sameyn karto
Sidaad sameyn karto. Shilinta waxay faafiyaan labada cudur ee kala ah TBE iyo borrelia. Waxayna ka helaan cawska iyo dhirta, gaar ahaan meelaha qoyan. Waxayna firfircoon yihiin xilliga gu’ga, jiilaalka iyo deyrta.
Tallaalka waxa laha helaa gabbaad (difaac) TBE ah
Tallaalkan waxaad ka helaysaa difaaca ugu fiican ee TBE. Si kastaba ha ahaatee suurtagal maaha in la tallaalo borrelia.
Sida looga hor tago shilinta
Dhar jirkha dhan awdaya iyo kabo caag ah.
Si joogto ah u hubi dharka oo burush ku nadiifi shillin haddii ay dhacdaba, si fudud ayaa loo arki kara markaad xidhan tahay dharka ifitiinka leh.
Kormeer jidhkaaga oo idil, haddii aad banaanka duurka ah u baxday, meydho oo shanleey timaha. Carruurta, waxay shilinta ku hadhsataa inta badan madaxa, gaar ahaan dhegaha iyo qabsiga timaha.
Haddii ay shilini ku qaniinto
Sidan sameey haddii aad ka heshay shilin meel ka
mid ah jidhkaaga:
Shilinta waa in sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah lagu saaraa, adigoo adeegsanaya birqabato.
Ku qabo gacanta markiiba oo si toos ah uga saar maqaarka.
Ku Dhaq boogta jeermis-dilaha oo gacmahaaga ku dhaq saabuun iyo biyo.
Haddii aadan si sax ah uga saarin shilinta jidhka oo dhan - sug dhawr maalmood. Sida caadiga ah, caabuq yar ayaa iman kara oo inta badan way sahlan tahay in lagu soo saaro birqabato biin ah ama cirbad inta jidhka ku harsan.
Raadi daryeel caafimaad tusaale ahaan haddii sida qandho ama madax xanuun ama bukaan kale aad iska dareento.
Bogga internetka ee 1177 oo cinwaankiisu yahay 1177.se waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan TBE-eega sidoo kale waqtiyada bilaa balanta ee la iska iman karo (drop-in) iyo macluumaad la xiriira xarumaha caafimaadka ee gobolka.